कुर्सी हल्लिदा भारतलाई दोष! - Deshko News Deshko News कुर्सी हल्लिदा भारतलाई दोष! - Deshko News
कुर्सी हल्लिदा भारतलाई दोष!
राजनीतिक विश्लेषक रोका नेपाली नेताहरुले आफैंले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नसक्दा त्यसको दोष अरुलाई दिने गरेको बताउँछन्। परराष्ट्र नीति, कोरोना संकट व्यवस्थापन, आर्थिक नीति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओली असफल भएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लागेको छ। पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न थालिएपछि ओलीले यस्तो फण्डा अघि सारेको रोकाको बुझाइ छ। नागरिक दैनिकबाट